दसैंको मुखमा भारतले फेरि गर्यो नाकाबन्दी ! « Deshko News
दसैंको मुखमा भारतले फेरि गर्यो नाकाबन्दी !
भैरहवा, असोज २०
सुनौली नाका हुँदै मुलुक प्रवेश गर्ने औद्योगिक र व्यापारिक मालवाहक गाडीलाई भारतीय जनपद प्रहरीले अवरोध र्पुयाउन थालेका छन् । सिमानादेखि करिब १५ किलोमिटर पर सडकमा तैनाथ भारतीय प्रहरीले नेपाल आउने गाडीलाई सहज रूपमा आउन नदिएर रोक्दै लाइनमा लगाउन थालेका हुन् ।
भारतीय प्रहरीले फलफूल, तरकारीजस्ता चाँडै सडेर नष्ट हुने सामानका गाडीलाई भने रोक्ने गरेका छैनन् । सुनौली हँुदै नेपाल आउने मालवाहक गाडीलाई भारतीय पुलिसले यस्तै अवरोध भारतको नाकाबन्दी र नेपालको मधेस आन्दोलनको बेलामा गरेका थिए । त्यसबेला दैनिक १ सय गाडी मात्र नेपाल आउने कोटा छुट्याएर उनीहरूले पैसा असुलेको व्यवसायीको आरोप छ ।
नेपाल र सीमावर्ती भारतीय व्यापारी र भारत–नेपाल मैत्री समाजले यसको विरोध गर्न थालेपछि सुधार आएको थियो । भैरहवा भन्सार कार्यालयका अनुसार अन्य दिन सहज भएको बेलामा दैनिक साढे ४ सयसम्म मालवाहक गाडी आउने गरेकामा यो अवरोधले दैनिक मुस्किलले साढे २ सयसम्म आउने गरेको छ । ‘वारि र पारिको भन्सार कार्यालयमा कुनै अवरोध नहँुदा पनि गाडी आउने संख्या निकै कम भएको छ,’ भैरहवा भन्सारका अधिकृत रवीन्द्र प्याकुरेलले भने, ‘भारततर्फ नियतबस अवरोध गरेजस्तो लाग्छ ।’ यस नाकाबाट अत्यधिक सवारी यातायातका गाडीको आयातले भन्सार राजस्व लक्ष्यभन्दा बढी असुली भइरहेकामा यसबाट असर पर्ने उनले बताए ।
गाडी चालकका अनुसार सिमानादेखि १५ किमि पर सम्पत्तियादेखि नेपाल आउने गाडीलाई भारतीय प्रहरीले रोक्ने गरेका छन् । सम्पत्तिया, नौतनवाको वाइपास, कोतवाली थाना, सुनौलीको ट्याम्पो स्ट्यान्ड र बसपार्कमा तैनाथ प्रहरीले रोक्ने गरेका हुन् । चाँडो आउन खोज्नेले प्रत्येक ठाउँमा ५ सयदेखि १ हजार भारुसम्म दिनुपर्ने नत्र धेरै दिनसम्म लाइनमा बस्नुपर्छ ।